LA OGAADAY: Weeraryahanka Chelsea Diego Costa oo la xaqiijiyay Inuu Heshiis la gaaray Koox China ka dhisan – Goorma ayuu bixi doonaa? | Laacibiin.net
Home » Horyaalada » Premier League » LA OGAADAY: Weeraryahanka Chelsea Diego Costa oo la xaqiijiyay Inuu Heshiis la gaaray Koox China ka dhisan – Goorma ayuu bixi doonaa?
LA OGAADAY: Weeraryahanka Chelsea Diego Costa oo la xaqiijiyay Inuu Heshiis la gaaray Koox China ka dhisan – Goorma ayuu bixi doonaa?	DIEGO COSTA ayaa heshiis ku kacaya £30million sanadkii la gaaray koox ka dhisan horyaalka China si uu ugu biiro marka uu dhamaado xili ciyaareedkan.
Saxafiga Spain ee Manu Carreño ayaa ka sheegay Barnaamij ka baxayay Idaacad kku taal dalkaas in weeraryahankan uu ogolaaday inuu ku biiro horyaalka bariga fog.
Costa – oo Chelsea kaga soo biiray Ateltico Madrid lacag dhan £32million sanadkii 2014 ayaa doonayay in bishii January uu ku biiro horyaalkaas laakiin kooxdiisa ayaa ka hor istaagtay.
Naadiga Tianjin Quanjian ayaa lacag dhan £70million dul dhigtay saxiixa xidigan laakiin tababare Antonio Conte ayaanan dooneyn inuu iska fasaxo xidigan asal ahaan kasoo jeeda Brazil maadaama ay udagaalamayaan horyaalka.
Laakiin Warark aayaa sheegaya in Costa loo ogolaan doona inuu kooxda ka tago Chelsea si uu uga mid noqdo xidigaha mushaarka ugu badan ka qaata kubada cagta.
Kooxda China ka dhisan ayaana xili hore heshiis la gaartay wakiilka Costa, Jorge Mendes taas oo ka dhigeysa in weeraryahankan uu ku biiro xagaagan marka uu dhamaado.
Chelsea ayaa baadi goobeysa badalka ciyaaryahankan, iyadoo isha ku haysa xiidga Real Madrid Alvaro Morata iyo weeraryahanka Torino Bellotti.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/la-ogaaday-weeraryahanka-chelsea-diego-costa-oo-la-xaqiijiyay-inuu-heshiis-la-gaaray-koox-china-ka-dhisan-goorma-ayuu-bixi-doonaa/">LA OGAADAY: Weeraryahanka Chelsea Diego Costa oo la xaqiijiyay Inuu Heshiis la gaaray Koox China ka dhisan – Goorma ayuu bixi doonaa?</a>